China Anọ Axis Robot Series factory na suppliers | Daya
Eldgbado ọkụ Robot Series
Isii Axis Robot Series
Usoro Axis Robot Anọ
TNCF4-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
TNCF3-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
Frequency Nchigharị Air Compressor
Anọ axis robot usoro JZJ100B-230 100KG
Anọ axis robot usoro JZJ25B-180 25KG
Anọ axis robot usoro JZJ15B-140 15KG
Nkowa okwu nkedo nke robot njikwa:
1. Robot na-ebu ibu na ibutu nnukwu ibu nwere ọtụtụ ibu site na ọtụtụ kilogram ruo ọtụtụ narị kilogram;
2. speedgba ọsọ na-agba ọsọ bụ ngwa ngwa na mgbanwe;
3. Mgbanwe mgbanwe, nwere ike mezue mgbagwoju njikwa na loading na ebutu ọrụ;
4. Nnukwu ntụkwasị obi na mmezi dị mfe.
5. Ọ nwere ike mezue ntụgharị ihu atọ nke nnukwu ihe dị ka njide, njem, ịghaghasị, nkwụsị na wdg. Ọ na-enye ihe ezigbo ngwá ọrụ maka na-ejizi na gbakọta ihe na na-anya-akara na nzukọ nke mmepụta akụkụ. Robot na-ebudata na ibudata ihe nwere ike belata ike ọrụ wee nye njikwa njikwa ihe. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ike izute gburugburu ebe obibi pụrụ iche, dịka ebe dị egwu ebe ndị ọrụ nyocha ihe mgbawa na-enweghị ike ịbanye, ma nye usoro ngwọta.
6. N'iji ihe eji eme ihe na-abụghị ọkọlọtọ, robot nwere ike ịghọta ụdị dị iche iche nke workpiece, na onye ọrụ ahụ nwere ike iwepụ ngwa ngwa ma dọrọ ibu ahụ, na-agagharị, na-agbagharị, na-aga n'ihu ma na-atụgharị. Na ibu na-ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi enịm ke preset ọnọdụ. Site na ya, otu onye nwere ike iji ihe ndị mmadụ ole na ole ga-ebugharị rụọ ọrụ dị mfe.
Anọ Axis Robot Series Teknụzụ oke
Kedu uru ndị a na-eji bọmbụ ebufe?
1. Igwe mgbagharị na-ejikwa ígwè ọrụ na-etinye obere ohere, nke na-eme ka nhazi nke usoro mmepụta na ụlọ ọrụ ndị ahịa, ma nwee ike ịchekwa nnukwu ụlọ nkwakọba ihe. Na robot enwere ike itinye ya na oghere dị warara n'ụzọ dị irè.
2. Palletizing na ụgbọ njem robot nwere usoro dị mfe na akụkụ ole na ole. Ya mere, akụkụ ahụ mapụtara nwere obere ọdịda ọnụego, a pụrụ ịdabere na arụmọrụ, mfe mmezi na ole na ole akụkụ ahụ mapụtara.
3. Ike oriri nke palletizing na njikwa robot dị ala. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ike palletizing ma na-ebugharị robot bụ ihe dịka 26KW, ebe ike nke palị a na-ahụ maka ihe dịka 5kW. Gbanyụọ ụgwọ ọrụ nke ndị ahịa.
4. Igwe na-agba ọsọ ma na-ejikwa robot nwere arụmọrụ siri ike. Mgbe nha, olu, ọdịdị ngwaahịa ngwaahịa ndị ahịa na ọdịdị na nha nke pallet gbanwere, mmepụta nkịtị nke ndị ahịa agaghị enwe mmetụta ntakịrị mgbanwe na ihuenyo mmetụ. Nwughari nke palletizing na ụgbọ njem robot bụ nnọọ nsogbu, ọbụna enweghị ike ọfiọk.
5. Nchịkwa niile nke palletizing na njikwa robot nwere ike rụọ ọrụ na ihuenyo nke ụlọ ọrụ na-achịkwa, na ọrụ ahụ dị mfe.
6. Ọ bụrụhaala na a kara aka mmalite na ebe a ga-etinye ya, ụzọ nkuzi dị mfe nghọta.
Nke gara aga: C ụba Servo Press (STA usoro)
Osote: Isii Axis Robot Series